Qeybta 1: Maxaad AVI dhammaan faylasha si fiican uma shaqeeyaan in iMovie?
Qeybta 2: Sida loo soo dhoofsadaan AVI in iMovie on Mac?
Qeybta 3: Maxaad ah file video AVI aan la keeno karo in iMovie?
Dad badan ayaa jecel yihiin inay daawadaan rabtaa ay, taxanaha TV ama clips halka ay ku biiro. Wixii ah macruufka qalab user, dareen ah farxad ayaa laga yaabaa inuu wax yar adag tahay in la gaaro baqdin arrimaha waafaqsan in qalabka macruufka leeyihiin ugu qaabab file AVI.
Waxaa la og yahay xaqiiqda ah in qalabka macruufka taageeraan kaliya qaabab file AVI sida MP4, M4V iyo MOV. Sidaas waxa ka mid ah ma u baahan tahay inaad samayso si aad u hesho clips kuwa ugu cadcad ee ka shaqeeya ay iPhone ama iPad?
Diinta video clips si ay u qaabab habboon waa mid ka mid ah oo macne leh oo wax ku ool ah oo xal jeer oo dhan. Article waxaa loogu talagalay in iftiimino hababka loo dhoofiyo files AVI iyo iyaga si fiican ugu shaqeyso codsiyada macruufka ku salaysan sida iMovie ah.
Halkan, waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud in ay dajiyaan AVI in iMovie on Mac, iyada oo software ah oo loo yaqaan Wondershare. Halkan waa in aad rabtay inay ogaato waxa ku saabsan oo dhan.
Video Converter kama dambaysta ah ee ay Wondershare waa mid ka mid ah codsiyada wax soo saar leh ku sugan suuqa in ay bixiyaan diinta si mug leh videos inay qaabab file kala duwan sida ugu badan ee dhan, MP4, wmv, DIVX, iwm
Wondershare Video Converter Ultimate ma ahan oo keliya waxay bixisaa deg deg video diinta, laakiin ay la socdaan in ay jiraan Koox ka mid ah muuqaalada in ay yihiin xusid mudan, sida:
30x dhakhso video diinta
Beddelaan inay gebi ahaanba qaab kasta.
Taageero 4K UHD
Dajinta ee YouTube videos
Wireless wareejinta of videos
In editor dhisay in xaalkaa, kor loogu qaado iyo shakhsiyeeyo warbaahinta aad.
2D video inay diinta ka 3D
GPU transcoding dardargelinta
Iyo qaar kaloo badan!
Sidee loo sameeyo?
Halkan waa hage u ah diinta AVI si haboon macruufka qaab socon isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate.
Talaabada 1: Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda Wondershare Video Converter Ultimate, abuurtaan codsiga ka desktop iyo sugto wax updates ay sabab u tahay in lagu rakibo si loo hubiyo in software si fiican u maamushaa oo aan wax cayayaanka iyo dambaysaa.
Talaabada 2: ka dib codsiga waxaa si guul leh u bilaabay, dooro 'dar files' doorasho la joogo dhexe ee suuqa kala codsiga iyo dhirta aad u jeclaystay filim ama video clip oo ay doortaan. Codsiga waxaa hadda ka akhriyi doonaa file oo u muujiyaan in ay video saxaarad.
Talaabada 3: In qaab saarka joogo khaanadda saxda ah ee suuqa kala ah, xulo qaab la doonayo wax soo saarka aad rabto in aad file video in la aad ku badaley. Waxaa jira diyaariyeen ah ee fursadaha qaab heli karo uu ka soo xusho, oo ay ku jiraan qaabab file laga bilaabo MP4, MP3 (audio), AVI, wmv, DIVX, MOV, iPad iyo wixii la mid ah.
Talaabada 4: Dooro 'MOV' ama 'iPad' ku xidhan tahay qalab macruufka ah ee aad ku sugan tahay u qabsado. Haddii aad la isticmaalayo iPhone ah, waa in aad u tagto qaab file MOV iyo haddii la isticmaalayo iPad ah, ka dibna u tagaan qaab file iPad.
Xaaladdan saaraya, waxaan la xulanayo doonaa qaabka file iPad.
Talaabada 5: Marka aad soo xulay qaab faylka ku habboon, ku dhacay badalo ee geeska hoose ee saxda ah iyo samir video ah in aanay u soo noqon.
Fiiro gaar ah: Haddii users isticmaalayso version tijaabo ah Wondershare Video Converter Ultimate ah, kaliya 1/3 of dhererka video laguu soo leexin doonaa. Oo dhererkeedu wuxuu beddelaad Full qoran yihiin oo kaliya in version bixisay.
Talaabada 6: waxaa la ogeysiin doonaa in aad wax yar ka sida ugu dhaqsaha badan aad file video uu badaley.
Tallaabo 7: Waxaad wirelessly faylka la gediyay wareejin karaan qalab ama isticmaal cable USB default la heli karo iyada oo qalab aad.
Geedi socodka waa dhameystiran yahay. Ku raaxayso video clip aad dukaamada waaweyn.
iMovie kaliya taageeraa tiro kooban oo codecs file sida MP4 iyo MOV. Aad u badan, AVI waxaa loo aqoonsan yahay qaab file Solo ah laakiin xaqiiqdu waa uun weel file ah iyo waxa dhab ahaan arrimaha waa nooca video iyo / ama codec audio waxaa loo isticmaali jiray si ay u abuuraan.
Guud ahaan, file AVI ah si fiican u ciyaari lahaa oo kaliya in iMovie marka labada video iyo qaab maqal ah oo file waxaa lagu taageeray oo akhriyaan iMovie laftiisa. Haddii qaab video file AVI ah waa la jaanqaadaya si loo iMovie oo maqal ah ma aha, ka dibna file AVI waxa u sabab ah ma la si fiican u akhri adigoo codsiga iyo xitaa ay ku guuldareysato inay u ciyaaro xataa haddii faylka la akhriyo.
Sidaa awgeed waa muhiim, waayo, mid si loogu badalo video files si ay u iMovie qaabab file socon.
Sida loo dar Voiceover in iMovie on Mac / iPhone / iPad
> Resource > iMovie > Sida loo soo dhoofsadaan AVI in iMovie?